Facebook Page 101 - Tips and Useful Information | mmshare
What are Facebook pages for? - Facebook page တွေရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လုပ်ငန်းကြီးတွေ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေ၊ တီး၀ိုင်းတွေ စတဲ့ အသင်းအဖွဲ့များအနေနဲ့ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုကို Facebook မှာ ထားရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ အသိပေးချက်တွေ၊ ကြော်ငြာတွေ၊ ပရိုမိုးရှင်းတွေ၊ အလုပ်ကြော်ငြာတွေ အစရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ တရား၀င် ဆက်သွယ်အသိပေးချင်တဲ့ အရာအားလုံးကို ထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Who can create? - အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုအတွက် Facebook Page တစ်ခုကို ဖန်တီးတော့မယ် ဆိုရင် အဲဒီသူဟာ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြု၊ တာ၀န်ခံတဲ့သူ ဖြစ်ရပါမယ်။ Facebook မှာလည်း Account လုပ်ထားပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။ အဖွဲ့ငယ်လေးတွေ၊ တကိုယ်တော် လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဒါဟာ ပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ Sony, Dell, Apple စတဲ့ ကော်ပိုရေးရှင်း အကြီးစားတွေအတွက်တော့ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။
Specific Page Name - စာမျက်နှာအမည် အတိအကျ ရဖို့အတွက် အနည်းဆုံး Fans 25 ယောက် ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Page တစ်ခုကို နှစ်သက်သူ (Fans) အရေအတွက် အနည်းဆုံး 25 ယောက်ရှိတဲ့ အချိန်မှ ဥပမာ - http://facebook.com/facebook လို့ အမည်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Renaming Page Name - စာမျက်နှာရဲ့ အမည်တွေက တစ်ခါပေးပြီးရင် နောက်ထပ်ပြန်ပြင်လို့ မရပါဘူး။ တကယ်လို့ ပြင်ချင်ရင်တော့ တစ်နည်းပဲ ရှိပါတယ်။ ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်လုပ်တဲ့နည်းပါ။ ဒါပေမယ့် Fans တွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့ Page တစ်ခု ဖြစ်လာမှာ ပြန်ပြင်ရရင် နှမျောစရာပါ။ အဲဒီအတွက် Page နာမည်ကို သေသေချာချာ ရွေးဖို့၊ ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
Landing Tab is Important - Facebook page တွေမှာ Landing tab ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် Page ကို အင်တာနက်ကြည့်ဆော့ဖ်၀ဲကနေ မြင်ရတဲ့အချိန်မှာ ပွင့်နေစေချင်တဲ့ Tab ကို Landing tab လို့ ပြောတာပါ။ ဘာမှ မလုပ်ထားဘူးဆိုရင် ကိုယ့် Page မှာရှိတဲ့ ပထမဆုံး tab ကို Default အနေနဲ့ စမြင်ရမှာပါ။ ဒီ Landing tab ကိုလည်း သေသေချာချာ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Fans တွေအနေနဲ့ Like လုပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှ ပြန်ပြင်လို့ မရတော့ပါဘူး။
Page Category also Important - Facebook Page တစ်ခု ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့် Page ကို ဘယ်အမျိုးအစားအောက်မှာ ထားချင်တယ်ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေးရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ အဓိက အုပ်စုကြီးအနေနဲ့ 1.Local Business, 2.Brand, product or organization နဲ့ 3. Artist, band or public figure ဆိုပြီး သုံးခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အုပ်စုကြီးတွေ အောက်မှာ ထပ်ခွဲထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် Page နဲ့ အသက်ဆိုင်ဆုံး Category ကို ဂရုတစိုက် ရွေးဖို့ လိုပါမယ်။ ပြီးမှ ပြန်ပြောင်းချင်လို့ မရပါဘူး။ ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်လုပ်၊ Category ပြန်ရွေးမှ ရပါမယ်။
Page Information Fields - ရွေးထားတဲ့ Page Category အပေါ်မူတည်ပြီး Page မှာပါတဲ့ Field တွေ မတူတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခါမှာ မလိုချင်တဲ့ Field တွေပါလာပြီး၊ လိုချင်တဲ့ Field တွေ ပါမလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မကြိုက်ရင်တော့ ပြန်ဖျက် ပြန်လုပ်ရမှမို့ သေချာအောင် အစကတဲက ရွေးဖို့ လိုပါတယ်။
Admins are Invisible - Facebook Page တစ်ခုရဲ့ Admin ကို ဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ Page Admin ရဲ့ Personal Facebook Account ကို Page ထဲမှာ ရှာလို့ မရပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့် Admin ကို ဖျောက်ထားပေးပါတယ်။
Messaging - Page တစ်ခုရဲ့ Admin နဲ့ User တွေကြားမှာ Message ပို့တာမျိုး လုပ်လို့ မရပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်လို့ မရပါဘူး။
Multi Admin - Facebook page တစ်ခုမှာ Admin အရေအတွက် အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ စတင်ဖန်တီးတဲ့ မူလ ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ နောက်ထပ် Admin များစွာကို ဆက်လက် ထည့်သွင်းလို့ (ဖယ်ထုတ်လို့) ရပါတယ်။
Visible to World & Search Engines - Facebook page တွေကို ဘယ်သူမဆို ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ Facebook account ရှိနေဖို့ မလိုပါဘူး။
Facebook page တွေဟာ အသုံးချတတ်သူတွေ အတွက်တော့ ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုတဲ့ Mini Websites တွေပါပဲ။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ညီအကိုမောင်နှမများ အနေနဲ့ Facebook Page လေးတွေ ဖန်တီးဖို့ လိုအပ်လာတဲ့ အချိန်မှာ အထိုက်အလျောက် အသုံး၀င်ပါလိမ့်မယ်.....
Reference Facebook Pages - from Facebook Help Center
Download Facebook Page manuals - from Box.net
Facebook Fan Page Creation for Your Blog - from 11 Dreams
Facebook ဆိုတာဘာလဲ - from Thiha Zaw on Multiply